कुलमानको कार्यकाल सकिन ४ दिन बाँकी, उनी प्राधिकरणमा फेरी आउने सम्भावना कति ? - सिम्रिक खबर
कुलमानको कार्यकाल सकिन ४ दिन बाँकी, उनी प्राधिकरणमा फेरी आउने सम्भावना कति ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल थपिएला या नथपिएला भन्ने कुराको ब्यापक चासो सर्वसाधारणमा रहेको छ । अधिकाशं मानिसहरुले घिसिङको कार्यकाल थपिनुपर्नेमा जोडबल गरेका छन् भने केहीले उनलाइ अर्काे कुनै संस्थामा जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यसैबिच सरकारले दुइ बर्ष कुलमानको कार्यकाल थप्ने तयारी गरेको छ । यसको लागि प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनको तयारी रहेको थियो । तर नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकको तयारी गर्नुपर्ने भएको कारण बैठक स्थगित गरेको श्रोतले बताएको छ ।अब आउने अर्काे मन्त्रीपरिषदको बैठकमा उनको कार्यकाल थप्ने बताइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएका कुलमानको म्याद यही भदौ २९ गते सकिँदैछ।
दुइ अध्यक्ष विच लडाइ – कुलमानलाइ दोस्रो कार्यकाल दिन या नदिने भन्ने विषयमा नेकपामा दुइ अध्यक्ष विचमा एकमत नभएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोहोराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने उनलाइ दोस्रो पटक पनि जिम्मेवारी नदिने पक्षमा छन् । यस विषयमा प्रचण्डले ओलीलाइ कन्भिन्स गरेको स्रोतको भनाइ छ । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि तीन महिना नबित्दै नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको थियो । विद्युत चुहावट रोक्दै घाटामा रहेको प्रधिकरणलाइ नाफामा पुर्याएको कारण उनलाइ उज्यालोको संज्ञा जनताले दिने गरेका छन् भने बत्ती गइहालेको खण्डमा कुलमान गएको भन्ने गरेका छन् । यस अघि प्राधिकरणको प्रमुख रहेका मुकेश काफ्लेलाइ फेरी प्राधिकरणमा ल्याउने चलखेल हुन लागेको पनि बताइने गरेको थियो ।